Banyere Anyị - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Brief Okwu Mmalite nke Company
Changzhou Longxin Machinery Co., Ltd e guzobere 2001 na 30 nde ego aha. The ụlọ ọrụ dị n'ebe ugwu development mpaghara nke Hengshanqiao Town ke n'ebe ọwụwa anyanwụ esịt Changzhou obodo, ọ dị nso ka ịgafe of Beijing-Shanghai elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè, Shanghai-Nanjing elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na Shanghai-Chengdu expressway. Longxin bụ a pụrụ iche na emeputa nke Chemical ígwè akụrụngwa na ngụkọta ebe banyere 13.600 square mita.
Longxin integrates oru nnyocha, mmepe na rụpụta, na ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ nke ọkachamara mmepụta. Anyị factory tumadi na-amị "Longxin" & "Huabao" ika igwe nke ntuziaka atọ mpịakọta na nkume igwe nri, haịdrọlik atọ mpịakọta na nkume igwe nri, kọmputa CNC atọ mpịakọta na nkume igwe nri, bead na nkume igwe nri, nano seramiiki ájá na nkume igwe nri, mbara igwekota wdg Anyị na-chepụta, iwekota, awụnyere na- mgbanwe dum zuru ezu yiri ngwaahịa akara dị ka ndị ahịa rịọrọ na anyị ngwá. Anyị ígwè ọrụ na-ọtụtụ-eji ink, mkpuchi, electronic mado, pesticide, ike batrị, nano ihe onwunwe, kwa ụbọchị chemical, akpụkpọ anụ plastic, pensụl, nri, e ji esiji ákwà, silicone roba, na guar chịngọm wdg
Anyị ụlọ ọrụ onye na-ezisara ụwa elu uzu nke egweri na dispersion technology na ị nwere a ọkachamara R & D otu na bụ mgbe onye ndú nke ọhụrụ na mgbanwe na ọrụ a. Anyị na-enweta ihe karịrị 20 n'akwụkwọ patent asambodo, tinyere 5 n'akwụkwọ òkù nchọpụta Kemịkalụ. Anyị nwere ike nye ọkachamara nzukọ akara dị ka ndị ahịa 'chọrọ mmepụta. Anyị na ngwaahịa na-exported na United States, Brazil, India, Russia, Japan, Korea, Singapore, Southeast Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara, na-enwe elu aha si n'agbụrụ dị iche iche nke ndụ.
Changzhou Longxin Machinery Co., Ltd nwere dị iche iche ùgwù ọnọdụ, gụnyere elu-tech enterprise, mba pụrụ iche na àjà ihe ọṅụṅụ-ezi powder technology na-eme nnyocha center, Micro-nano ihe nkwadebe engineered na mepere ule site, na osote onyeisi oche unit nke Chinese ink Association. Longxin igwe na-na certifications nke TüV, BV, OA na ISO09001: 2018.
Anyị na-agbanwe agbanwe ụkpụrụ bụ "Quality mbụ, Magburu onwe Service, Ahịa Afọ Ojuju". Ezi obi na-welcome enyi ma n'ụlọ na mba ọzọ na-arụkọ ọrụ na anyị na ike a na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu nke chemical ụlọ ọrụ ọnụ!
Ịga nke ọma nnweta nke ala-ekesịpde ụlọ ọrụ.
Ịba isi obodo na Longxin Machinery Co., Ltd e guzobere.
Longxin Hydraulic Three ala Mill e mepụtara.
Longxin CNC Three ala Mill na bead Mill e mepụtara.
Longxin High viscosity bead Mill e mepụtara.
Longxin hoputara dị osote onyeisi oche unit nke Chinese ink dee Association.
Longxin bead Mill nwetara a ọnụ ọgụgụ nke mba nchọpụta Kemịkalụ.
afọ mmepụta uru n'elu 60 nde na Silicone ígwè e guzobere alaka.
Longxin e nyere ikike ịbụ National Special Ultra-ezi powder technology na-eme nnyocha center.
Longxin e nyere ikike ịbụ High-tech enterprise.
Longxin-anọgide na-aga n'ihu, na-eru ibu ihe nweta na-eme n'ọdịnihu.
Na-agbanwe agbanwe ụkpụrụ: Quality mbụ, Magburu onwe Service, Ahịa Afọ Ojuju
Ahịa upmost, Magburu onwe Service
Ọ bụla na-arụ nke Longxin emeso ahịa na oké njọ na-akpata àgwà, ịgbaso ọrụ echiche nke "na-ewere na ndị ahịa dị ka etiti na-ewere ina ka ndu", malite na ahịa si ina, ịmata ndị ahịa si olileanya, na n'ikpeazụ ndị ahịa afọ ojuju . Ka ọ bụla ahịa mmetụta ezi obi anyị si tupu ire na mgbe-ere ya ere.
Professional Team, Ilekwasị anya egweri Technology
Longxin nwere a akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ 20. Na nke a afọ 20, anyị na e-elekwasị anya na otu ihe na-amị mbụ na klas egweri akụrụngwa. N'okpuru nduzi nke n'elu mmepụta na R & D engineer, anyị kpụrụ a ọkachamara mmepụta na mmepe otu, na-ebikwasị a ntọala siri ike maka uto nke anyị egweri azụmahịa.
Ebighebi Innovation, Nọgidenụ Ịgbago
Longxin nwere dị iche iche ùgwù ọnọdụ, gụnyere elu-tech enterprise, mba pụrụ iche na àjà ihe ọṅụṅụ-ezi powder technology na-eme nnyocha center, Micro-nano ihe nkwadebe engineered na mepere ule na saịtị. Site anyị na-aga n'ihu mma na ọhụrụ, Longxin a ghọtara site ahịa anyị ma nweta elu aha. Anyị ga-anọgide na-ewu anyị ika na mụbaa anyị ọhụrụ.